IWolder ibetha itafile ngeglasi yeVR ngexabiso lokuhlaselwa kwentliziyo | Iindaba zeGajethi
IWolder ibetha itafile ngeglasi yeVR ngexabiso lokuhlaselwa sisifo sentliziyo
Inyani yokuba sikwixesha leNene leNene ayinakuphikiswa, ke, kwaye kwimizamo yokugqibela yedemokhrasi, iqela lophuhliso leWolder liphinde lazisa iindaba kusapho lweWolder VISION ngesandla sikaDavid I jikeleza. Ngale ndlela sikwazile ukungqina ukufika kwemveliso entsha evela kuphawu lweSpain olujoyina iinkampani ezinkulu, oko kukuthi, kunye isibheno esisoloko sibonakalisa izixhobo, ixabiso elithengekayo. Ke yiza iiglasi zeWolder VR esizibonisa apha ngezantsi.
Ngale ndlela, iWolder iba kuphela komenzi waseSpain onazo zonke izinto eziyimfuneko zokwenza kunye nokwabelana ngomxholo kuzo zombini iVR kunye ne360º.
Ezi ziglasi zeWolder VR zenziwe nge-polycarbonate, zikhatshwa ngumbala omhlophe ofihlakeleyo kolu hlobo lwemveliso. Kwelinye icala, ngokubhekisele kuyilo, zihlala zilungile, into ekhubekisayo kunzima ukoyisa xa sithathela ingqalelo imveliso. Ukongeza, baya kusivumela ukuba silungelelanise indawo yabo, ukuze sikwazi ukujonga umxholo wabo we-102 ngeyona ndlela intofontofo, neephedi ezimbini ezinkulu ezinxibelelana nobuso bethu. Ukongeza umxholo obonakalayo kwezi glasi, sinokusebenzisa nasiphi na isixhobo esiphathwayo phakathi kwe-4 kunye ne-intshi ye-6,5.
Iiglasi zeWolder eziyinyani
Sikwazile ukuvavanya iiglasi kwigumbi lokubonisa lanamhlanje eMadrid, kwaye inyani kukuba xa kukho uhlengahlengiso olukhoyo, sijamelene nemveliso engenanto yakwenza nomona ngeglasi zeVR ebeziziswe yi-LG kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, nditsho ezaziwayo-kakuhle i-Samsung VR.
Okona kubaluleke kakhulu, ezi glasi ziya kuba kwintengiso ngoMvulo we-21 kaNovemba, kubathengisi abaphambili abahlala behamba neWolder, ezinje ngeCarrefour. Ixabiso, esaziyo kakuhle ukuba yeyiphi eyona nto unomdla kakhulu kuyo, yi- € 19,90 kuphela, phantse ngama-50 eurandi ngexabiso eliphantsi kuneglasi yokwenyani enikezelwa yinkampani yaseMzantsi Korea, i-Samsung, umzekelo.
Umncedisi ogqibeleleyo wekhamera yakho engama-360º
Inkampani yaseSpain ikwanayo kwikhathalogu yayo eyaziwayo I-miCam Globe 360º, ikhamera eya kusenza sikwazi ukurekhoda umxholo kule ndiza ikhetheke kakhulu. I-miCam Globe 360º okwangoku ixabisa i- € 229 kwiwebhusayithi yeWolder kwaye inezinto zilandelayo:
Imveliso encinci ye-USB
Inkxaso yamakhadi e-MicroSD ukuya kuthi ga kwi-32GB
Iigram ezili-104 kuphela
Umgcini webhayisekile nesigcina-ntloko
Khumbula ukuba iinethiwekhi zokuncokola ezinjengeFacebook sele zinenkxaso yemifanekiso engama-360º, ehamba nenkqubo yokwenyani kwi-YouTube.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » IWolder ibetha itafile ngeglasi yeVR ngexabiso lokuhlaselwa sisifo sentliziyo
Ubunjani bohlobo lwebrand ngokuthi ikhamera iyafana ne-homido 360 evela kwinkampani yeHomido.
ezinye iiglasi ze-vr ezizukulwana zekhadibhodi kagoogle yemfumba, xa bebeka into enje nge-samsung gear vr ngee-sensors nayo yonke into, kwaye iyahambelana nayo nayiphi na i-smartphone (ngakumbi i-Z5 yeNkulumbuso: 3) kwaye oko kunciphisa ukubambezeleka kokuhamba uye ku-0 okanye into I-imperceptivle, kwaye ixabisa isiqingatha sento yexabiso leSamsung, kwaye ngesicoci esisusa isiphumo segridi, ewe ewe, ngekhe sikwixesha leVR. kukho itekhnoloji yoku, imveliso nganye inokuxabisa i-euro ezingama-30 okanye ngaphantsi kwaye ibe yeyona ilungileyo, i-gyroscope ye-3-axis ene-3-axis accelerometer esuka kwi-adruino ayixabisi ngaphezulu kweedola ezili-10, kwaye iya kuba nexabiso eliphantsi kakhulu. kodwa bakhupha eyona imbi kakhulu, bathatha ixesha elide kakhulu, kwaye amaxabiso ayabiza ngokungafanelekanga.
Inyani yile yokuba ndicinga ngezinto eziliwaka zokuphuma ngaphambi kwezi zininzi. Yimakethi egcweleyo kunye neyeglasi. AbakwaSony abafanele ukuba nomfanekiso ngqondweni wezi.
I-Baby Boom, inqwelomoya ephezulu eya kuthi iqhube iimvavanyo zayo zokuqala ngo-2017
Ukwenza iifowuni zevidiyo kwi-WhatsApp